ကိုဗစ်ကူးစက်ခြင်းခံရလို့ နှလုံးခုန်နှုန်းတွေမြန်ပြီး မလှုပ်ရှားနိုင် ဖြစ်နေရတယ်ဆိုတဲ့ ချမ်းမြေ့မောင်ချို - Uniqueprox
ကိုဗစ်ကူးစက်ခြင်းခံရလို့ နှလုံးခုန်နှုန်းတွေမြန်ပြီး မလှုပ်ရှားနိုင် ဖြစ်နေရတယ်ဆိုတဲ့ ချမ်းမြေ့မောင်ချို
အဆိုတော် အိအိကတော့ တစ်ခေတ်တစ်ခါက အောင်မြင်ခဲ့တဲ့ တေးသံရှင်ကြီးတစ်ယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ အိအိရဲ့သားနဲ့သမီးဖြစ်နဲ့ ချမ်းမြေ့မောင်ချိုနဲ့ သူရမောင်ချိုတို့ကလည်း အနုပညာလမ်းမမှာ ကိုယ်စီလျှောက်လှမ်းနေကြတာဖြစ်ပြီး
အောင်မြင်မှုတွေ အထိုက် အ လျောက် ရရှိနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကနေ့မှာတော့ အိအိက ကိုဗစ်ဖြစ်ပြီးတဲ့အပြင် နှလုံးခုန်တွေအရမ်းမြန်ပြီး မလှုပ်ရှားနိုင်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ ချမ်းမြေ့မောင်ချိုရဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေကို
ပြောပြလာပါတယ်။ အဆိုတော် အိအိက “ကျမသမီး. July 3rd wave မှာ ကိုဗစ်ဖြစ်လို့ ဆေးကုသလိုက်ရပါတယ် Post covid နှလုံးအရမ်းခုန်ပြီး မလှုပ်နိုင်ဖြစ်လို့ ဆေးဆက်ကုရပါတယ်.
ပထမ Sinopharm ၂ ကြိမ်ထိုးပါတယ်။ ခု Covitshield ထိုးပါတယ်.. ဆေးအရှိန်ကြောင့်လား ချွဲချင်လို့လားမသိ အကိုက်အခဲပျောက်ဆေး တိုက်ပြီး ဆေးထိုးတဲ့နေရာ နာတယ်ဆိုလို့ ရေခဲအုံပေးရပါတယ်
အမယ်မင်း မောထာဟယ် ” ဆိုပြီး ပြောလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ချမ်းမြေ့မောင်ချိုကတော့ ကျန်း မာရေးမကောင်းတဲ့ အချိန် မေမေ့အနားမှာနေရင်း အချွဲပိုနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ပရိသတ်ကြီးလည်း ချမ်းမြေ့မောင်ချိုတစ်ယောက် အမြန်ဆုံးကျန်းမာစေဖို့ ဆုတောင်းပေးကြပါဦးနော်။
အဆိုေတာ္ အိအိကေတာ့ တစ္ေခတ္တစ္ခါက ေအာင္ျမင္ခဲ့တဲ့ ေတးသံရွင္ႀကီးတစ္ေယာက္ပဲျဖစ္ပါတယ္။ အိအိရဲ႕သားနဲ႔သမီးျဖစ္နဲ႔ ခ်မ္းေျမ့ေမာင္ခ်ိဳနဲ႔ သူရေမာင္ခ်ိဳတို႔ကလည္း အႏုပညာလမ္းမမွာ ကိုယ္စီေလွ်ာက္လွမ္းေနၾကတာျဖစ္ၿပီး
ေအာင္ျမင္မႈေတြ အထိုက္ အ ေလ်ာက္ ရရွိေနတာပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒီကေန႔မွာေတာ့ အိအိက ကိုဗစ္ျဖစ္ၿပီးတဲ့အျပင္ ႏွလုံးခုန္ေတြအရမ္းျမန္ၿပီး မလႈပ္ရွားႏိုင္ျဖစ္ခဲ့တဲ့ ခ်မ္းေျမ့ေမာင္ခ်ိဳရဲ႕က်န္းမာေရးအေျခအေနကို
ေျပာျပလာပါတယ္။ အဆိုေတာ္ အိအိက “က်မသမီး. July 3rd wave မွာ ကိုဗစ္ျဖစ္လို႔ ေဆးကုသလိုက္ရပါတယ္ Post covid ႏွလုံးအရမ္းခုန္ၿပီး မလႈပ္ႏိုင္ျဖစ္လို႔ ေဆးဆက္ကုရပါတယ္.
ပထမ Sinopharm ၂ ႀကိမ္ထိုးပါတယ္။ ခု Covitshield ထိုးပါတယ္.. ေဆးအရွိန္ေၾကာင့္လား ခြၽဲခ်င္လို႔လားမသိ အကိုက္အခဲေပ်ာက္ေဆး တိုက္ၿပီး ေဆးထိုးတဲ့ေနရာ နာတယ္ဆိုလို႔ ေရခဲအုံေပးရပါတယ္
အမယ္မင္း ေမာထာဟယ္ ” ဆိုၿပီး ေျပာလာခဲ့တာပဲျဖစ္ပါတယ္။ ခ်မ္းေျမ့ေမာင္ခ်ိဳကေတာ့ က်န္း မာေရးမေကာင္းတဲ့ အခ်ိန္ ေမေမ့အနားမွာေနရင္း အခြၽဲပိုေနတာပဲျဖစ္ပါတယ္။ ပရိသတ္ႀကီးလည္း ခ်မ္းေျမ့ေမာင္ခ်ိဳတစ္ေယာက္ အျမန္ဆုံးက်န္းမာေစဖို႔ ဆုေတာင္းေပးၾကပါဦးေနာ္။
ဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့ အနုပညာရှင်များ အမြန်ဆုံး လွတ်မြောက်ဖို့ နည်းလမ်းလေးကို အကြံပေးပြောပြလာတဲ့ မယ်လိုဒီ